Njengobuchwepheshe bokuxhumana obuthuthuke kakhulu, inkomfa yevidiyo enencazelo ephezulu ingenziwa ngokufinyelelwa ku-inthanethi kuphela. Ithathe indawo yengxenye yohambo lwebhizinisi futhi yaba imodeli yakamuva yezokuxhumana, ethuthukisa ukusebenza kahle kokuxhumana nokuphathwa kwabasebenzisi, futhi...
I-EIBOARD ihambele uMbukiso Wezisetshenziswa Zezemfundo wase-China wama-80 ngempumelelo!
I-EIBOARD ihambele uMbukiso Wezisetshenziswa Zezemfundo wase-China wama-80 ngempumelelo! Ithimba le-EIBOARD lihambele umbukiso wama-80 wemishini yezemfundo yase-China ngo-Okthoba 23-25, 2021. Ngendikimba ethi “IOT Empowerment, Wisdom Fusion!”, sibonise ibhodi elihlakaniphile elirekhodikayo le-LED elithi V4.0 entsha...
Izinguquko ezilethwa ibhodi elihlakaniphile kumodi yokufundisa
Enqubweni yokufundisa evamile, yonke into inqunywa uthisha.Okuqukethwe kokufundisa, amasu okufundisa, izindlela zokufundisa, izinyathelo zokufundisa ngisho nezivivinyo zabafundi zihlelwa ngothisha kusenesikhathi. Abafundi bangabamba iqhaza ngokungenzi lutho kule nqubo, okungukuthi, ba ...
Inamandla kangakanani i-multimedia yonke-in-one PC yokufundisa okuhlakaniphile?
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bolwazi, i-multimedia ihlanganiswe konke kukhompuyutha eyodwa inikeza inkundla entsha yokufundisa esebenzisanayo yokuguqulwa kwekharikhulamu entsha. I-EIBOARD multimedia yonke-in-one PC yenza ikilasi lakho libe lula kakhulu. Kulula ukusebenza ngenkinobho eyodwa ukushintsha, inkinobho eyodwa ku ...
Indlela yokwenza okuningi nge-Led interactive touch screen ngezindlela ezi-4?
Sebenzisa ngokugcwele ulwazi lobuso nobuso - ukubhala ngesikhathi esifanayo. Thola wonke umuntu emhlanganweni ukuthi abambe iqhaza kumanothi abhalwe ngesandla (ukunakwa kokubhala ngesandla kuguqula ukubhala ngesandla kwesikrini okukhethiwe kube umbhalo ojwayelekile. Sebenzisa okuqukethwe kusikrini ukuze wenze amaminithi omhlangano acace futhi acace). Yenza ukuthi...
Ungawukhetha kanjani umkhiqizo ofanele wokufundisa okusebenzisanayo ekilasini?
Uma sikhetha ibhodi elihlakaniphile lokufunda ngokuhlanganyela, okhiye abangezansi bangaba yireferensi enhle. Ukuxhumana Noma ngabe iprojektha, ibhodi elimhlophe, noma ibhodi lokuthinta, othisha kumele bakwazi ukuxhuma amadivayisi abo (kanye nabafundi) ukuze bayisebenzise ngokugcwele. Cabangela ukuguquguquka kwe-acro...
Ukuvela kwamathuluzi okufundisa
Ibhodi lebhodi selibusa cishe amakhulu amabili eminyaka. Ekuqaleni kwawo-1990, ukukhathazeka ngothuli lukashoki nokungezwani komzimba nakho kwashukumisela abafundi ukuba bashintshele ebhodini elimhlophe. Uthisha walincoma ithuluzi elisha, elibavumele ukuba bagqamise futhi banwebe isifundo ngemibala ehlukahlukene. Ikilasi lonke liyazuza...
Isizukulwane esisha sebhodi elihlakaniphile elisebenzisanayo
Manje sisezigabeni zokuthuthuka ngokushesha zoguquko lwezobuchwepheshe emkhakheni wezemfundo. Phakathi neminyaka emine kuya kwemihlanu ezayo, kulinganiselwa ukuthi izikole eziningi zizothatha indawo yamabhodi amhlophe asebenzisanayo esitayela esivamile ngezikrini zokuthinta "ezesikrini esikhulu" ezintsha. Kusho ukuthini lokhu ...
Ukusebenzisana nobulula bebhodi elihlakaniphile
Ibhodi lephaneli yephaneli ehlakaniphile esebenzisanayo ye-EIBOARD ilungele ubuciko, indalo egqugquzelwe emakilasini obuciko. Qinisekisa abasebenzisi ukuthi bajabulele ukuzizwisa okulula okuzwakala njengokubhala nokudweba ngamapeni namabhulashi angempela. Amabhodi amaningi amhlophe e-Interactive Whiteboard abone amaphuzu amabili kuphela...
I-Interactive Flat Panel Idlala Indima Ebalulekile Yenkomfa Yesimanje!
I-Interactive Flat Panel Idlala Indima Ebalulekile Yenkomfa Yesimanje! Iphaneli eliyisicaba elisebenzisanayo le-EIBOARD lincike emathubeni ayo aguqukayo amagumbi enkomfa esimanje ukuze kwakhe indawo yokucabanga eyenza kube lula ukugeleza ngokukhululekile imibono. Ivumela ukusebenza kweqembu ukuthi kwandiswe futhi ulwandle...
Ukufundisa kwebhodi lokubhalela sekuphelelwe yisikhathi, futhi iphaneli yokuxoxisana yamafulethi isingene ngokusemthethweni ezikoleni ezinkulu!
Ukufundisa kwebhodi lokubhalela kuphelelwe yisikhathi, futhi iphaneli ye-multimedia all-in-one interactive flat isingene ngokusemthethweni ezikoleni ezinkulu! Ziqhutshwa inqubo yokwaziswa kwezemfundo, izikole eziningi ziyayishiya indlela yokufundisa ebhodini lebhodi, futhi zihlome ngesethi ...